Scindapsus ọla edo, Aworan, eserese, N Joy, Queen, Exotic na ụdị ndị ọzọ - Osisi - 2020
Scindapsus ọla edo - na-egbu egbu ma ọ bụ na ọ bụghị, akpụkpọ na-enwu site na scindapsus
Liana scindapsus bụ nke ezinụlọ Aroidae (Araceae). Ebe ebe omenaala dị bụ oke ọhịa oke ọkụ dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Rutu ọghọm gụnyere ụdị mkpụrụ osisi iri abụọ na ise. Aha a sitere n'okwu Grik "Skindapsos", nke pụtara “osisi ivy yiri”. N'ime aha ndị a ma ama bụ Esemokwu, muzhegon, nwanyị di ya nwụrụ, ọsụsọ ọla edo. N'ime oke ọhịa, liana nwere ike ịrị elu osisi ruru 15 mita. Dịka ọdịnala ụlọ, skindapsus na-adọta uche ya na mpempe akwụkwọ oval nwere ụdị agba. Otu n'ime ụdị creeper bụ skindapsus ọla edo.
Scindapsus ọla edo: nkọwa na atụmatụ
N'ime anụ ọhịa, ọ bụ mkpụrụ vaịn ọkara. Usoro mgbọrọgwụ nke skindapsus na-anọchite anya ya n'otu ụdị abụọ - fibrous n'okpuru na ikuku. Site na mkpọrọgwụ dị n'elu ala, liana nwere ike ịrị ogologo ụzọ n'akụkụ ogwe osisi ma too ọtụtụ kilomita. N'ụfọdụ obodo na mpaghara (dịka ọmụmaatụ, Florida, Sri Lanka) ọ nwere nnukwu ohere nke na ọ ghaghị ịlụ ọgụ ka ọ bụrụ nje ndị ọzọ na - emebi ihe ọmụmụ nke mpaghara ahụ.
Scindapsus bụ ihe ọkụkụ pụrụ iche, Ome na-arapara n'ahụ nkwado ma nwee ike iru ogologo 3 m
N'ime ahihia ụlọ, ihe dị ka liana bụ ihe eji eme ọrịrị mara mma. A na-eji osisi ndị ahụ akpọrọ ahịhịa amịkpọ iji ghee ahịhịa ahụ.
Ọnọdụ mpempe akwụkwọ mpempe oval yiri ọzọ. Agba nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enwe usoro, elu ahụ na-egbu maramara ma dịkwa mma na-emetụ aka.
N'ime oge okooko osisi, a na -eme ka obere inflorescence, na-adị ka okarob kechiri na eriri. N'ụlọ, Liana fọrọ nke nta ka ọ ghara ifuru.
Maka ozi! Ọtụtụ mgbe, osisi a nwere mgbagwoju anya na epipremnum, nke bụkwa nke ezinụlọ Aroid ma yie scindapsus nke ukwuu. Isi ihe dị iche n’etiti vaịn ndị a bụ ihe dị iche iche chọrọ maka ọnọdụ eji eji.
Varietiesdị dịgasị iche iche nke ọla edo na-enyocha ihe ịchọ mma kacha mma:
Nke ato. Elu agba nke ahịhịa nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ahịhịa na agba ọchịchịrị;
Scindapsus Marble Queen (Marble Queen). Ejiri ya nke ahịhịa mara mma, nke na-acha ọcha kpamkpam. E nwere ihe ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, n'ihi akwụkwọ ndị ahụ na-acha ha mma. Se ahụ yiri akpịrị ma ọ bụ stains;
Nwanyị na-acha ọla edo (Golden Queen). Colorcha nke akwụkwọ osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na edo edo (dị ka aha ya na-egosi) na agbasasị ụdị enweghị usoro;
Neon A na-amata ya site na akwukwo elongated nke agba odo na-acha odo odo;
Scindapsus N Joy. Agba nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọcha ókè na blotches nke otu agba.
Attentionaa ntị! Oge ezumike nke ụdị niile na-amalite na ọkara nke abụọ nke November wee gwụ na njedebe nke February.
Ofdị Scindus Pods
Epipremnum ọla edo - nlekọta ụlọ na ụdị ndị ọzọ
Dịkarị nke scindusus:
na-ese. Ebe amụrụ ifuru bụ Malaysia. Ejiri mara ya ahihia ahihia, okpo ahihia nke agba gbara ọchịchịrị nke nwere obere ma otutu ocha. Shapedị nke akwụkwọ osisi bụ obi. Varietydị kachasị ewu ewu bụ Agirees;
ọla edo (scindapsus gold). Akwụkwọ ya nwere njirimara edo edo. Varietydị ahụ nwere ọtụtụ ụdị ewu ewu dị iche na agba.
Siamese. Osisi ahụ nwere nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọcha;
perakensis. Njirimara njirimara bụ akwụkwọ osisi toro ogologo nke nwere akụkụ ya kapịrị ọnụ. Na ọnọdụ anụ ọhịa, ogologo nke ị ga-eru 60 m, ma mgbe ị na-eto ụlọ - site na 10 ruo 15. m Liana na-ahọrọ ikuku na-ekpo ọkụ na iru mmiri dị elu.
N'agbanyeghị ụdị osisi nke Liana bụ, ma a hụrụ ya, Siamese, peracensis ma ọ bụ nyocha ọla edo, nlekọta ụlọ na-abụkarị otu. N'okwu niile, o zuru ezu ịgbaso iwu dị mfe ma soro ndụmọdụ maka ito ifuru n'ụlọ.
Scindapsus - nlekọta ụlọ na otu esi agbasa ya
Scindapsus na-ahọrọ oghere ndo ma ọ bụ ndo ele mmadụ anya n'ihu. A na-atụ aro ịhazi ifuru ahụ 2 mita site na windo ndịda. Umu anumanu na nkpuru ahihia doro anya choro obere ocha di iche.
Dị Mkpa! N’enyeghị ọkụ, usoro dị n’akwụkwọ ahụ nwere ike ịdị oyi ma ọ bụdị kwụsị kpamkpam, akwụkwọ ya n’onwe ya ga-egwepịa. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ime ụlọ gbara oke ọchịchịrị ogologo oge, ifuru ga-amalite itufu akwụkwọ na masse. Oke ọkụ na - eduga n'eziokwu ahụ na ha na - amalite ịkpọ nkụ na.
Oge a tụrụ aro ka oge okpomoku dị ọkụ wee bụrụ site na 18 Celsius ruo 24 Celsius, n'oge udu mmiri - site na 13 Celsius ruo 16 Celsius C (nke kacha nta nwere ike ịmara bụ ogo 12).
Mmiri na iru mmiri
Liana chọrọ nhazi mmiri nke ala n’ime ogo ya. A na-ekpebi oge mmiri na-agba site na ogo nke ihicha ala: mgbe ala gafere nkụ ole na ole nke sentimita, omimi ahụ ga-agbanye mmiri. N'oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị, ugboro ole ịgbara mmiri bụ 1 oge n'ime ụbọchị 4-5, n'oge oyi - oge 1 na 7-8 ụbọchị.
Iru mmiri kwesịrị ịdị 60%. N'oge ọkọchị, a na-atụ aro ka ịghasịa ihe ọkụkụ ahụ ugboro 3-5 n'izu. N’oge oyi, ekwesiri ịwepu liana n’ebe a na-agbanye ọkụ ma kpochaa akwụkwọ ya mgbe niile. Nkwado nke na-etinye skindapsus bara uru maka ịgba. Ọ bụ ihe na-achọsi ike na n’ime ite nke ite nwere ụrọ gbasaa.
Thegbara ọnya ahụ
Nweta ọdịbendị n'oge uto niile. N'oge opupu ihe ubi na oge mgbụsị akwụkwọ, oge ejiji dị elu bụ oge 1 na ụbọchị 15-20, n'oge oyi, ọ na-ebelata ka ọ bụrụ oge 1 n'ime izu isii. Dịka fatịlaịza, a ga-eji ogige mmiri ịnweta mmiri na ọnụọgụ 1/2 nke usoro nke onye nrụpụta tụrụ aro ya.
Hoya ifuru - olee ụdị Karnosa, Kerry, Bella, fleshy, multiflora yiri
Mesapụ osisi vaịn n'ụzọ atọ:
Maka ozi! Mostzọ a na-ahụkarị bụ grafting.
Maka nke a, apical ị ga nke ifuru, nke a na-enweta n'ihi etolite vaịn, na-etinye ya n'ime arịa ma ọ bụ kụọ ya n'ime ala. Ka mkpụrụ osisi ahụ wee gbanye mkpọrọgwụ, ọ dị mkpa iji lelee ọnọdụ ndị a:
n’elu ọka nke ọ bụla kwesịrị inwe akwụkwọ 2-3;
Okpomoku ikuku kacha nta - 22 Celsius.
A na-egbutu ya na akụkụ nke 45 Celsius, mgbe ahụ, a na-eji ebe pụrụ iche na-eji akụkụ pụrụ iche iji bulie uto mgbọrọgwụ. Nke ozo, a gha nkpuru ahihia n’ime ala, nke nwere ájá na sphagnum, ma obu n’ime iko jiri mmiri (i gha acho itunye mbadamba carbon n’ime ya ka o wee mebie ma gbochie nkpuru ahu ire). N'elu osisi gbatịa polyethylene ma ọ bụ kpuchie ya na nnukwu iko. Dịrị ịgba ga-eme n’ime ụbọchị 15-20.
Dị Mkpa! A na - eme mpempe akwụkwọ n'oge oge ọ bụla n'afọ, na - agbanyeghị mkpọrọgwụ, ọ bụ n'usoro kachasị mma n'oge ọkọchị na oge opupu ihe ubi. N'oge oyi, mkpọrọgwụ malitere nwayọọ nwayọọ.
Mmeputakwa site na ipu ahihia na - acho inweta uzo ohuru n'ihi nko nke ikuku. Iji mee nke a, ị ga - emerịrị:
tinye ite nwere ala n’akụkụ isi ite mmiri;
ziga otu ihe nke oge ịgha ahụ n’ime ya ma dozie ya n’ọnọdụ a (ịnwere ike iji ntutu isi);
fesaa azuokokoosisi n’ala;
mgbọrọgwụ ga-apụta mgbe izu ole na ole gachara na saịtị nke kọntaktị nke ala ahụ gbaa. Mgbe ịgbanyechara, azuokokoosisi nwere ike ikewapụ ya na nne na nna osisi;
gaa n’ihu n’etolite atụpụta na-eto eto n’ime ite ọhụụ.
Omenala na-eto eto choro ka emegharia ya kwa afọ. A na-atụgharị ihe ọkụkụ nke okenye na ite ọhụụ ma ọ dịkarịa ala 1 oge na afọ 2-3. A na-atụ aro ka ịme usoro a na mbido oge uto (ya bụ, na February - Mach).
Ikuku a na-akụ kwesịrị ịdị ala ma na mbara. N’ọdị n’ihu, nke a ga - eme ka ịgha mkpụrụ nke gbanyere mkpọrọgwụ na liana mee ka ohia bụrụkwuo ihe ịtụnanya. Mixturegwakọta ala na-agagharị kwesịrị ịgụnye ihe ndị a na nha anya kwesiri:
Maka ozi! A na-atụ aro ka mkpụrụ jiri obere obere perlite ma ọ bụ ụrọ gbasaa. Na ala nke ite kwesịrị idobe mma drainage oyi akwa.
Nsogbu si na scindapsus
Ọ gaghị ekwe omume ikwu n'ụzọ ziri ezi ma scindapsus nwere nsi ma ọ bụ na ọ bụghị. N'aka nke ọzọ, akpụkpọ anụ nke sitere na scindapsus n'ihi emetụ osisi vaịn enweghị ike inweta. N'aka nke ozo, ndi okacha amara adighi etinye idebe ifuru n’ime ulo ma oburu na anu ulo bi n’ime ya. N'inwecha akụkụ ọ bụla nke ahịhịa a, anụ ahụ nwere ike inwe mgbakasị ọnụ, ọnụ, ire. Iri ifuru nwere nri riri nne, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa.
.Dị ndị a ma ama
Na Russia, a na-akụkarị ụdị ụdị scindapsus ndị a:
Ọ bụ scindapsus piktus, hụrụ ya ma ọ bụ mottled. Gee ifuru kpuchie ya na waatị oge n’iru. Formdị nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-enwu gbaa, nke dị na mkpụmkpụ mkpụmkpụ nke akwụkwọ, enweghị atụ.
Maka ozi! Oghere nke efere ahụ dị ihe dị ka cm 7, ogologo ya dị ihe dị ka cm 15. Ogologo ọla ọcha ka eji chọọ ya mma, nke yiri stains.
Uzo ndi umu agbogho bi na ha mechiri udiri ihe di iche. Akwụkwọ ya bụ ok, ọtụtụ, ike, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba, kpuchie ya na ọlaọcha tụrụ.
Akwụkwọ nke nwere obi dị n’elu ogologo, kpuchie ya na ọlaọcha na ọnyá ọla.
Grade Scindapsus Marble Queen
Ngwakọ a na-adịghị ahụkebe, nke na-anya ọ bụghị naanị ọla ọcha, kamakwa na-eme ka akwụkwọ doo anya, nke mejupụtara akụkụ abụọ, otu n'ime ya buru ibu karịa nke ọzọ (n'ihi nke a akwara Central na-agbatị n'akụkụ).
Scindapsus anwụ Tọsde
Dịkarịsịrị iche iche. Ohia dị ihe dịka 20 cm.
Ndụ Scindapsus Obi .tọ
Otutu nke ohia ruru 20 cm.
Ezi akwụkwọ dị iche iche
Scindapsus bụ osisi vaịn mmiri mara mma nke ukwuu. N'ihi ihe eji achọ ya mma, ụdị na ụdị dị iche iche, a na-eji ya arụ ọrụ maka ịchọ ụlọ mma. Akwụkwọ nri bara ụba nwere ike iweta ọ bụghị naanị obi ụtọ, kamakwa ikuku dị ọcha.
Isi iwu nke ọdịda na ilekọta marigolds
Orchid cymbidium: nkọwa, ụdị, nlekọta
Ingkụnye osisi Roses n’ọhịa n’ọhịa ma lekọta ha
Uchkọ Fuchsia na nlekọta n'ụlọ
Ugu na akwukwo okwu: nkpuru, beri ma obu akwukwo nri
Chickpeas: ole calorie, ihe vitamin ndị dị, ihe bara uru, ihe ị ga-eri
Oge osisi blackberry kwachie maka ndị mbido: eserese na ntuziaka n'usoro
Mkpụrụ tomato dịgasị iche iche - "Mikado Pink": nkọwa nke tomato na foto
Hydrangea Dentel de Gorron - nkọwa, akuku na nlekọta
Otu esi eche osisi oliv n'ulo